आईपिओ भर्ने हो ? इन्फिनिटी लघुवित्तमा खुल्दैछ | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more आईपिओ भर्ने हो ? इन्फिनिटी लघुवित्तमा खुल्दैछ
आईपिओ भर्ने हो ? इन्फिनिटी लघुवित्तमा खुल्दैछ
जेठ ३ गते, २०७६ - १७:०१
काठमाडौं । नवलपुर गैंडाकोटस्थित केन्द्रिय कार्यालय रहेको इन्फिनिटी लघुवित्त वित्तीय संस्थाको आईपिओ खुल्ने भएको छ । संस्थाको आगामी जेठ १३ बाट आईपिओ निष्काशन गरिने जनाइएको छ ।
इन्फिनिटी लघुवित्तले जारी पूँजी २० करोड ७४ लाख रुपैयाँको ३२.५० प्रतिशत बराबरको सार्वजनिक निष्काशन गर्न लागेको हो। बैशाख २३ गते धितोपत्र बोर्डबाट आईपिओ निष्काशन अनुमति पाएको लघुवित्तले जेठ १३ गतेदेखि आईपिओ निष्काशन गर्न लागेको हो।
यस अनुसार उक्त आईपिओमा लगानी गर्न इच्छुक लगानीकर्ताहरुले जेठ १३ देखि १६ गतेसम्म आवेदन गर्न सक्नेछन्। आवश्यक आवेदन नपरेको खण्डमा भने असार १० गतेसम्म बिक्री खुला रहने जनाइएकाे छ ।
लघुवित्तको शेयर बिक्री प्रबन्धक सिभिल क्यापिटल रहेको छ। लघुवित्तको आईपिओमा अनलाईनबाट मेरो शेयर तथा धितोपत्र बोर्डबाट आश्वा सदस्यता लिएका लगानीकर्ताकै बैंक खाता रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सी–आस्वा प्रणालीमा आईपिओ भर्न सकिन्छ।
जेठ ३ गते, २०७६ - १७:०१ मा प्रकाशित